Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ọnụahịa matraasi
Ọ nọ n'ihe mgbu. Mgbe Daaley tara ahụhụ dị ndụ, Edison mere ka o kwụọ ụgwọ ya ruo ụbọchị ọ nwụrụ, ọ na-elekọta ego niile. Ná mmalite nke narị afọ nke 20, ka m mesie gị obi ike na ọ bụghị ihe a na-emekarị iji mee ka ndị ọrụ na-enweghị ike ịrụ ọrụ na ịkwụ ụgwọ.
Na 1100 Chestnut n'akụkụ ọnụ ụzọ ahụ na Museumlọ ihe ngosi nka, mgbidi ojii na-egosi, yana ihe ịrịba ama anya na-elekarị anya. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị na-emegide ya. Crusiontụ anụ ahụ, gụnyere onye bụbu Councilor Councour Warnett Kennedy, wakporo Neon ọkụ. \_ "Enwere okwu a ma ama na Warnett Kennety banyere Vancouver ịbụ onye eke, obodo ekwesịghị ịbụ ihe okike, ọdịdị kwesịrị ịbụ merban John Akin.
Kemgbe ahụ, nkwonkwo ahụ na-acha ọbara ọbara na ebe a na-acha ọcha tebụl tebụl na narị ndị ọzọ nọ ebe niile. Taa, Zalto, Austria mepụtara aha ọla-edo. Kedu ihe bụ isi ihe na-eme ka ihe ịga nke ọma? Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ a na-acha odo odo na-acha uhie uhie ma enweghị ike ịhụ ya. N'ikwu ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbochi n'etiti ndị na-azụ ahịa na ethereal White Burgundy.